တစ်ခါတစ်လေ အရေပြားပေါ်မှာ အညိုအမည်းကွက်တွေ ဘာကြောင့် ပေါ်လာတာလဲ …. - TheeSayChin
တစ်ခါတစ်လေ အရေပြားပေါ်မှာ အညိုအမည်းကွက်တွေ ဘာကြောင့် ပေါ်လာတာလဲ ….
တခါတလေ ဘာမှတိုက်မိခိုက်မိတာမရှိဘဲနဲ့ အရေပြားပေါ်မှာ အညိုအမည်းကွက်တွေပေါ်လာရင် ဘာကြောင့်လဲ၊ ဘယ်လိုပျောက်အောင်လုပ်ရမလဲ စဉ်းစားရခက်နေတာမျိုးဖြစ်ရပါတယ်။ ဒီလို အညိုကွက်တွေဖြစ်ရတာ အကြောင်းရင်းတချို့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပြီး သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေနဲ့လည်း တိုက်ရိုက်ပတ်သက်နေပါတယ်။ ဒီတော့ အရေပြားပေါ်မှာ အညိုအမည်းကွက်တွေပေါ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းနဲ့ သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုသိရဖို့ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦးနော်။
တခါတရံ အရမ်းလေးတဲ့ပစ္စည်းတွေ မ,လိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ဆံချည်မျှင်သွေးကြောလေးတွေ ပြတ်သွားပြီး အရေပြားပေါ်မှာ အညိုအမည်းကွက်တွေဖြစ်လာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်က ခံနိုင်တာထက်ပိုတဲ့ အလုပ်တွေလုပ်မိသွားပြီဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်တာကြောင့် နောက်ဆို ဒီလို လေးပင်တာတွေမ,တဲ့အခါ ဆင်ခြင်လိုက်ပါ။
သံဓာတ်အားဖြည့်ဆေး၊ အရောင်လျော့ဆေးနဲ့ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေသောက်ထားတာကြောင့်လည်း ဒီလို အညိုကွက်တွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ ဆေးသောက်ထားတဲ့နေ့တွေမှာ အဲ့ဒီလို အညိုအမည်းကွက်တွေဖြစ်လာတယ်လို့ သတိထားမိတယ်ဆိုရင်တော့ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းသွေးကြောတွေမှာ သွေးယိုစီးမှုတွေဖြစ်နေနိုင်တာကြောင့် ဆရာဝန်နဲ့သေချာပြသပြီး စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။
အရေပြားပေါ်က အညိုအမည်းကွက်တွေဟာ သွေးရောဂါတစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီအညိုအမည်းကွက်တွေပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာ ခြေထောက်ရောင်ရမ်းနာကျင်တာ၊ သွားဖုံးသွေးယိုတာ ၊ နှာခေါင်းသွေးထွက်တာနဲ့ အရေပြားအပေါ်လွှာမှာ သွေးကြောပြတ်ရာလေးတွေတွေ့နေရပြီဆိုရင်တော့ သွေးကင်ဆာလိုရောဂါမျိုးကြောင့် ဖြစ်နေနိုင်တာမို့ ချက်ချင်းဆေးစစ်ဖို့လိုပါတယ်။
READအပျော်ရွှင်ဆုံးသူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ စိတ်ကျရောဂါကို ဒီလိုကာကွယ်ထားပါ
ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ဗီတာမင်ဓာတ်တစ်မျိုးမျိုး ချို့တဲ့နေတဲ့အချိန်မှာလည်း အရေပြားပေါ်မှာ အညိုအမည်းကွက်တွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ ဗီတာမင်၊ အာဟာရဓာတ်ချို့တဲ့မှုကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့ အညိုအမည်းကွက်တွေကတော့ ထိလိုက်ရင် နာကျင်မှုမရှိပါဘူး။ ဒီအခြေအနေဆိုရင်တော့ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ဗီတာမင် B12 ၊ ဗီတာမင် ကေ နဲ့ ဗီတာမင် စီ အဓိကလိုအပ်နေတာပါ။
ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ဟော်မုန်းပမာဏ မညီမျှခြင်းကြောင့်လည်း အရေပြားပေါ်မှာ အညိုကွက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးတွေမှာ အီစထရိုဂျင်ဟော်မုန်း နည်းနေမယ်ဆိုရင် ဆံချည်မျှင်သွေးကြောလေးတွေကို အားနည်းစေပြီး ပြတ်ထွက်တဲ့အထိဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
အသက်ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာ အရေပြားတစ်သျှူးတွေက အားနည်းလာပြီး ကျုံ့ဆန့်နိုင်စွမ်းလည်း နည်းလာပါတယ်။ အဲ့ဒီအခါ အရေပြားအောက်မှာရှိတဲ့ သွေးကြောလေးတွေလည်း အားနည်းလာပြီး ပြတ်လွယ်လာတာကြောင့် အဲ့ဒီနေရာတွေမှာ အညိုကွက်တွေဖြစ်လာပါတယ်။
အရေပြားပေါ်က အညိုအမည်းကွက်တွေဟာ ဆီးချိုရောဂါရဲ့ရှေ့ပြေးလက္ခဏာဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ သွေးထဲမှာ သကြားဓာတ်များနေတဲ့အခါ သွေးလှည့်ပတ်မှုကို ကမောက်ကမဖြစ်စေနိုင်ပြီး အရေပြားပေါ်မှာ အညိုအမည်းကွက်တွေလွယ်လွယ်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ တခါတလေ ထိခိုက်မှုက မပြင်းထန်ပေမယ့် အညိုကွက်က အကြီးကြီးပေါ်နေတာမျိုး၊ အနာမကျက်လွယ်တာမျိုး၊ အရေပြားပေါ်မှာ အဖြူရောင်အကွက်လေးတွေဖြစ်တာမျိုးနဲ့ မျက်စိမှုန်တာတွေ တပြိုင်တည်းဖြစ်နေရင်တော့ ဆီးချိုရောဂါဖြစ်နိုင်ချေများနေတာကြောင့် ဆရာဝန်နဲ့ပြသင့်ပါပြီ။
READကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးပြီး အသုံးမကျတော့သလို ခံစားရတိုင်း ဒါကိုဖတ်ပါ healthlifeadvice/pinterest
ပုံမှန်ဆို အရေပြားပေါ်က အညိုအမည်းကွက်တွေက တဖြည်းဖြည်းချင်းအသားရောင်ဘက်ပြောင်းလာပြီး ၂ ပတ်အတွင်းပျောက်သွားတတ်ပါတယ်။ အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲ အရောင်က ခရမ်းရောင်၊အညိုရောင်ဖြစ်နေပြီး ၂ပတ်ထက်ပိုကြာတဲ့အထိမပျောက်သွားဘူးဆိုရင်လည်း စိုးရိမ်ရတဲ့အနေအထားမှာရှိနေတာကြောင့် ဆေးစစ်ဖို့လိုပါတယ်။
တခါတလေ ဘာမှတိုကျမိခိုကျမိတာမရှိဘဲနဲ့ အရပွေားပျေါမှာ အညိုအမညျးကှကျတှပေျေါလာရငျ ဘာကွောငျ့လဲ၊ ဘယျလိုပြောကျအောငျလုပျရမလဲ စဉျးစားရခကျနတောမြိုးဖွဈရပါတယျ။ ဒီလို အညိုကှကျတှဖွေဈရတာ အကွောငျးရငျးတခြို့ကွောငျ့ဖွဈနိုငျပွီး သငျ့ရဲ့ကနျြးမာရေးအခွအေနနေဲ့လညျး တိုကျရိုကျပတျသကျနပေါတယျ။ ဒီတော့ အရပွေားပျေါမှာ အညိုအမညျးကှကျတှပေျေါရတဲ့ အကွောငျးရငျးနဲ့ သငျ့ရဲ့ကနျြးမာရေးအခွအေနကေိုသိရဖို့ ဖတျကွညျ့လိုကျပါဦးနျော။
တခါတရံ အရမျးလေးတဲ့ပစ်စညျးတှေ မ,လိုကျတဲ့အခါမြိုးမှာ ခန်ဓာကိုယျထဲက ဆံခညျြမြှငျသှေးကွောလေးတှေ ပွတျသှားပွီး အရပွေားပျေါမှာ အညိုအမညျးကှကျတှဖွေဈလာရခွငျးဖွဈပါတယျ။ သငျ့ခန်ဓာကိုယျက ခံနိုငျတာထကျပိုတဲ့ အလုပျတှလေုပျမိသှားပွီဆိုတဲ့ အဓိပ်ပါယျဖွဈတာကွောငျ့ နောကျဆို ဒီလို လေးပငျတာတှမေ,တဲ့အခါ ဆငျခွငျလိုကျပါ။
သံဓာတျအားဖွညျ့ဆေး၊ အရောငျလြော့ဆေးနဲ့ အကိုကျအခဲပြောကျဆေးတှသေောကျထားတာကွောငျ့လညျး ဒီလို အညိုကှကျတှဖွေဈတတျပါတယျ။ သငျ့အနနေဲ့ ဆေးသောကျထားတဲ့နတှေ့မှော အဲ့ဒီလို အညိုအမညျးကှကျတှဖွေဈလာတယျလို့ သတိထားမိတယျဆိုရငျတော့ ခန်ဓာကိုယျအတှငျးပိုငျးသှေးကွောတှမှော သှေးယိုစီးမှုတှဖွေဈနနေိုငျတာကွောငျ့ ဆရာဝနျနဲ့သခြောပွသပွီး စဈဆေးသငျ့ပါတယျ။
အရပွေားပျေါက အညိုအမညျးကှကျတှဟော သှေးရောဂါတဈခုခုကွောငျ့ဖွဈတယျဆိုရငျ အဲ့ဒီအညိုအမညျးကှကျတှပေျေါလာတဲ့အခြိနျမှာ ခွထေောကျရောငျရမျးနာကငျြတာ၊ သှားဖုံးသှေးယိုတာ ၊ နှာခေါငျးသှေးထှကျတာနဲ့ အရပွေားအပျေါလှာမှာ သှေးကွောပွတျရာလေးတှတှေနေ့ရေပွီဆိုရငျတော့ သှေးကငျဆာလိုရောဂါမြိုးကွောငျ့ ဖွဈနနေိုငျတာမို့ ခကျြခငျြးဆေးစဈဖို့လိုပါတယျ။
READအပြျောရှငျဆုံးသူတဈယောကျဖွဈဖို့ စိတျကရြောဂါကို ဒီလိုကာကှယျထားပါ
ခန်ဓာကိုယျထဲမှာ ဗီတာမငျဓာတျတဈမြိုးမြိုး ခြို့တဲ့နတေဲ့အခြိနျမှာလညျး အရပွေားပျေါမှာ အညိုအမညျးကှကျတှဖွေဈလာတတျပါတယျ။ ဗီတာမငျ၊ အာဟာရဓာတျခြို့တဲ့မှုကွောငျ့ ဖွဈလာတဲ့ အညိုအမညျးကှကျတှကေတော့ ထိလိုကျရငျ နာကငျြမှုမရှိပါဘူး။ ဒီအခွအေနဆေိုရငျတော့ သငျ့ခန်ဓာကိုယျထဲမှာ ဗီတာမငျ B12 ၊ ဗီတာမငျ ကေ နဲ့ ဗီတာမငျ စီ အဓိကလိုအပျနတောပါ။
ခန်ဓာကိုယျထဲမှာ ဟျောမုနျးပမာဏ မညီမြှခွငျးကွောငျ့လညျး အရပွေားပျေါမှာ အညိုကှကျတှဖွေဈနိုငျပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ အမြိုးသမီးတှမှော အီစထရိုဂငျြဟျောမုနျး နညျးနမေယျဆိုရငျ ဆံခညျြမြှငျသှေးကွောလေးတှကေို အားနညျးစပွေီး ပွတျထှကျတဲ့အထိဖွဈစနေိုငျပါတယျ။
အသကျကွီးလာတဲ့အခြိနျမှာ အရပွေားတဈသြှူးတှကေ အားနညျးလာပွီး ကြုံ့ဆနျ့နိုငျစှမျးလညျး နညျးလာပါတယျ။ အဲ့ဒီအခါ အရပွေားအောကျမှာရှိတဲ့ သှေးကွောလေးတှလေညျး အားနညျးလာပွီး ပွတျလှယျလာတာကွောငျ့ အဲ့ဒီနရောတှမှော အညိုကှကျတှဖွေဈလာပါတယျ။
အရပွေားပျေါက အညိုအမညျးကှကျတှဟော ဆီးခြိုရောဂါရဲ့ရှပွေ့ေးလက်ခဏာဖွဈနနေိုငျပါတယျ။ သှေးထဲမှာ သကွားဓာတျမြားနတေဲ့အခါ သှေးလှညျ့ပတျမှုကို ကမောကျကမဖွဈစနေိုငျပွီး အရပွေားပျေါမှာ အညိုအမညျးကှကျတှလှေယျလှယျဖွဈစနေိုငျပါတယျ။ တခါတလေ ထိခိုကျမှုက မပွငျးထနျပမေယျ့ အညိုကှကျက အကွီးကွီးပျေါနတောမြိုး၊ အနာမကကျြလှယျတာမြိုး၊ အရပွေားပျေါမှာ အဖွူရောငျအကှကျလေးတှဖွေဈတာမြိုးနဲ့ မကျြစိမှုနျတာတှေ တပွိုငျတညျးဖွဈနရေငျတော့ ဆီးခြိုရောဂါဖွဈနိုငျခမြေားနတောကွောငျ့ ဆရာဝနျနဲ့ပွသငျ့ပါပွီ။
READကိုယျ့ကိုယျကို ယုံကွညျမှုပြောကျဆုံးပွီး အသုံးမကတြော့သလို ခံစားရတိုငျး ဒါကိုဖတျပါ healthlifeadvice/pinterest
ပုံမှနျဆို အရပွေားပျေါက အညိုအမညျးကှကျတှကေ တဖွညျးဖွညျးခငျြးအသားရောငျဘကျပွောငျးလာပွီး ၂ ပတျအတှငျးပြောကျသှားတတျပါတယျ။ အဲ့လိုမဟုတျဘဲ အရောငျက ခရမျးရောငျ၊အညိုရောငျဖွဈနပွေီး ၂ပတျထကျပိုကွာတဲ့အထိမပြောကျသှားဘူးဆိုရငျလညျး စိုးရိမျရတဲ့အနအေထားမှာရှိနတောကွောငျ့ ဆေးစဈဖို့လိုပါတယျ။
← ရှက်တတ်သူတွေ ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါ ပုံလှလှလေးတွေရဖို့ ရိုးရှင်းတဲ့ Pose များ
ခြေသလုံးကြီးသူတွေအတွက် ခြေသလုံးသွယ်လျစေမယ့် အထိရောက်ဆုံး လေ့ကျင့်ခန်း (၆)မျိုး →
ပုဆိုး​လေးနဲ့ လူကြီ​လေးလုပ်​​​နေတဲ့ Rဇာနည်​ရဲ့သားငယ်​​လေး ချစ်​ချစ်​တုန်
January 25, 2019 Min Yar Zar 0
Itachi ဝတ်စုံကို ပထမဆုံးထုတ်ဝတ်ပြီး ပွဲတက်လာခဲ့တဲ့ စည်သူ(ပလတ်ကျွတ်)
ကလေးမွို့တှငျ မှယေ့ာပျေါ ဖုနျးအားသှငျးရာမှ အပူလှနျကဲ၍ မီးလောငျကြှမျးမှု ဖွဈပှား